Karatra SIM Roa tapitrisa Novonoina Tao Zambia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2019 4:54 GMT
Toeram-pivarotana finday ao Lusaka. Sary avy amin'i Curious Lee (CC BY-NC-SA 2.0)
Karatra SIM maherin'ny roa tapitrisa an'ireo Zambiana mpampiasa finday no novonoina tamin'ny herinandro lasa teo, araka ny nambaran'ny Zambia Information and Communication Technology Authority – Manampahefana misahana ny Fampahalalam-baovaova sy ny teknolojiam-pifandraisana. Taorian'ny volana maromaro nanentanana ireo mpanjifa mba hanoratra ny karatra SIM amin'ny anarany, ankehitriny nilaza ny sampan-draharaha misahana ny fampanarahan-dalàna fa ho vonoina ny karatra SIM an'ireo rehetra tsy nanaja ny fe-potoana voalaza, ny 31 Janoary.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Zambia, izay zara raha misy 13 tapitrisa, dia samy saika manana karatra SIM telo isan'olona, iray isaky ny tambajotra fifandraisandavitra. Ampiasain'ireo Zambiana ihany koa izy ireo hidirana amin'ny tolotra aterineto amin'ny finday.
Tao anatinà filazana iray nivoaka taoriana kelin'ny nikatonan'ny fanoratana anarana no nilazan'ny ZICTA fa 9 462 504 no isan'ireo mpanjifa nisoratra anarana, “karatra SIM 8 235 991 no voasoratra anarana, raha 2 215 376 ireo novonoina “.
Ankoatra ny fanesorana ny tolotra maro ho an'ireo mpanjifa izay tsy nahavoasoratra ara-dalàna ny karany, mbola nandrahona hanasazy ireo tambajotram-pifandraisandavitra telo mpamatsy tolotra ihany koa ny ZICTA, dia ny MTN, ny CellZ ary ny Airtel, tao anatin'izay fanambarana izay ihany, nanao hoe :
Tahaka ny tranga rehetra anatina dingana manana habe toy itony [fanoratana ny SIM amin'ny anarana manokana], dia misy ny fetram-pahadisoana efa andrasana sy azo ekena. Izay sampan-draharaha rehetra hita ho nanana hadisoana tafiditra anatin'io fetram-pahadisoana io , dia asaina hamerina hijery ny rafitra anatiny indray. Na izany aza, ho faizin'ny lalàna izay tambajotra manao hadisoana ambony mihoatra ny azo ekena.
Nahitana olana hatrany ny fizotry ny fanoratana ny karatra SIM. Nisy ireo olona nanoratra anarana tamin'ny fiandohan'ilay hetsika, efa-bolana talohan'ilay fe-potoana farany, no nahita tamin'ny volana lasa teo fa tsy ao amin'ny lisitry ny voasoratra anarana akory ry zareo. Ny hafa kosa lasa amin'ny anaran'olona hafa ny laharany ary misy aza lasa nifamadika ny maha-lahy na vavy azy.
Ny filoha lefitra teo aloha Brigady-Jeneraly Godfrey Miyanda, mpitarika ny antoko mpanohitra Heritage Party sy mpanakiana mafy ny politikan'ny fanoratana ny karatra SIM amin'ny anarana manokana dia manana karatra SIM misoratra amin'ny anarany nefa tsy fantany akory ny fisian'izany. Niala tsiny taminy avy eo ilay orinasan-tserasera.
Ny Jeneraly Miyanda dia isan'ireo mpanjifa izay nandrahona ny hitory any amin'ny fitsarana ny ZICTA, niampanga azy ireo ho manohintohina ny zo sy ny fahalalahan'ny fiainana manokana, ny fizakamanana ary ny fifandraisana. Ny andro faran'ilay fisoratana anarana, nanoratra ilay Jeneraly Miyanda, tamin'ilay lahatsoratra nolazainy ho hafatra farany, nanao hoe :
Ry mpiara-miasa sy fianakavian'ny tambajotra sosialy anaty aterineto, Tiako ny mampahafantatra anareo fa nampahatsiahy ahy ny Zambia Information and Communication Technology Authority (ZICTA) fa amin'ny misasakalina androany no hampisarahin'izy ireo ahy amin'ny sivilizasiona amin'ny famonoana tsy misy antony ny karatro SIM. Tsy nanao heloka bevava aho anefa, moa misy azo itokisana amin'io resaka fanoratana anarana io ary/ na ny fanararaotana ataon'ireo fitaovam-pifandraisana mba hanamarinana ireo fepetrany mitaha amin'ireo zo efa azo.
Gen Miyanda, izay nanoratra fanambaràna maro momba io olana io, no nanohy hoe :
Amin'ny alalan'io fihetsika tsotra io no hametrahan'ny ZICTA fa alohan'ny hahafahako misitraka ny fahalalahako maneho hevitra efa nomena ahy, dia tsy maintsy mangataka ny ho voasoratra anarana amin'ireo tompon'andraikitra ao aminy aho aloha. Amin'ny alàlan'izany, manitsakitsaka ny zoko hanana fiainana manokana sy ny zo hafa [fizakamanana] ny ZICTA .Hamafisiko hatrany fa tsy azon'iza na iza esorina na atakalo vetivety mandritra ny fotoana fohy izany fahafahana izany. Tsy nisy valiny hatreto ny firesahako tamin'ny ZICTA sy tamin'ireo mpanome tolotra finday. Izany dia midika fa tsy afaka miresaka na mampiasa ireo fitaovana niaraka novidiana ho amin'izany fifandraisana izany intsony aho amin'ny misasakalina. Raha fintinina, mandrapivahan'ity olana ity, dia tsy ho tratra antso intsony aho, na anaty Aterineto aza. Ity no hafatro farany aloha hatreto.
Mpanao gazety iray sady mpanjifa nisoratra anarana tamin'ny finday izay nandrahona ny hanangana fitoriana faobe iray manohitra ny ZICTA no nitaraina fa tsy nisy namoaka ilay hetsika fanoherany ny fanoratana karatra SIM ireo haino aman-jery ao an-toerana. Noahiahian'i Kasebamashila Kaseba ho voatambitambin'ny sampan-draharaha mpanara-maso ireo haino aman-jery, sampana izay nanohana ara-bola hetsika ara-pampahalalam-baovao isan-karazany, anisan'izany ny fanomezana loka sy sakafo maraina any am-piasana. Hoy izy :
Koa satria efa mamarana sy mandinika ireo adihevitry ny vahoaka sy ny haino aman-jery isika, mba hanokafana ny dingana ara-pitsarana, raha jerena ny fe-potoana farany nomen'ny ZICTA ny Zoma 31 Janoary 2014 hamonoana ny karatra SIM, dia tiako ny milaza sy mamaritra fa angamba any aoriana isika tsy afaka mangataka “didy” na “famerenana mijery ny fitsarana” satria io raharaha io dia tsy miankina amin'ny lalàna na ny SI 65 tamin'ny 2011. Fa kosa, ilay “hetsika fitoriana faobe” toy izay efa voalaza tetsy aloha no mety ahitàna fanenjehana amin'ireo orinasam-pampahalalam-baovao sasany nahazo tombony tamin'ny fanentanana fanoratana anarana karatra SIM […] nataon'ny ZICTA sy ny famonoana karatra ary mety ho tonga hatramin'ny “fisamborana olom-pirenena”.